Guud - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 10)
Isgacan qaad khatar ah ee rookayaasha
Farshaxanka magaalooyinka ee aan ku arki karno dariiqyadeena wuxuu noo ogolaanayaa inaan marinno qoraallo sida kan uu sameeyay farshaxanka farshaxanka bikismo
10 magac oo waaweyn oo bedelay naqshadooda astaanta sanadkii 2014
2014 wuxuu ahaa sanad ay noocyada sida PayPal ama Barcadi ay astaanta u beddeleen wax hadda ka sii muuqda isbeddellada naqshadeynta
100 casharro fiidiyow oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha (II)
Isku-darka 100 casharro fiidiyow ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka, oo laga soosaaray Creativos Online.
100 casharro fiidiyow oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha (I)
Isku-darka 100 casharro fiidiyow oo lagama maarmaan ah oo ka socda Creativos Online Miyaadan weli arag? Maxaad sugeysaa
Sawirada farshaxanimada dhabta ah ee Kazuhiro Tsuji
Kazuhiro Tsuji muuqaalkiisa farshaxanimada dhabta ah wuxuu xambaarsan yahay aragtida Salvador Dalí iyo halyeeyada kale ee caanka ah
Damon Hellandbrand wuxuu maleeyay oo sawiray 12 calaamadood oo baaxad leh oo ku saabsan nuurka oo kaa ilaalin kara inaad soo jeedo
Fiidiyowga soo socda waxaan ku arki doonnaa sida aan u qaabeyn karno kaftan firfircoon oo leh Adobe Photoshop iyo Ka dib Raadka.
Ma taqaanaa majaajillo majaajillo firfircoon? Soo ogow sida ay yihiin iyo sida aad ugu isticmaali karto mashaariicdaada naqshadeynta.
Geedi socodka sameynta sawirka dhuxusha ee Stefan Harris
Sawirka dhuxusha maahan hawl fudud, laakiin haddii aad hesho farsamo sax ah waxaad sameyn kartaa shaqooyin yaab leh.
Casharka Fiidiyowga: Noocyada Midabka, Pantone iyo Midabada CMYK ee Photoshop
Casharka soo socda ee fiidiyowga ah waxaan dib u eegeynaa qaababka midabka iyo isticmaalka buuga ku jira Adobe Photoshop.
4-ta talaabo ee muhiimka ah si loo sameeyo sawir leh rinji dijitaal ah
Rinjiyeynta dijitaalka ah waa mid ka mid ah farsamooyinka ugu moodada badan xilligan oo u adeegta sameynta sawirro waaweyn
Farshaxanno kala duwan ayaa muujinaya sida loo abuuro aaladda loo yaqaan 'geodesic sphere' oo aan lahayn wax aan ka badnayn gidaarka ama xaalad kasta oo kartoon ah
Katerina Plotnikova iyo sawirkeedii cajiibka ahaa ee ay la galeen xayawaanka duurjoogta ah
Warbixin sawir leh oo bani'aadam ah oo la socota xayawaanka duurjoogta ah ee ay qaadatay sawir qaade Katerina Plotnikova's. Cajiib.
Xidhmada Bilaashka Vintage Christmas Vector
Ururinta bilaashka ah ee dulinka kirismaska ​​loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka oo ay kujiraan boodhadh, xaashiyo, calaamado iyo ujeedooyin
Boggee internetka ah ayaa ka fiican in lagu muujiyo faylalkaaga, Behance ama Dribbble?
Behance ama Dribbble waa labada ikhtiyaar ee ugufiican ee lagu muujiyo faylalkaaga internetka oo aad lahesho macaamiil badan
Sawirka dhijitaalka ah VS sawirka analogga ah
Maxay ku kala duwan yihiin sawirka dhijitaalka ah iyo midka analogga ah? Muxuu qaabkii ugu horreeyay caan u noqday?
Su’aasha ugu weyn: Waa maxay sawir?
Weligaa ma isweydiisay sawirku muxuu yahay iyo sida uu u gaaro maskaxdeenna? Waad la yaabi doontaa inaad ogaato isku ekaanshaha isha iyo kamarada.
Riusuke Fukahori's 3D Rinjiyeynta Dahabka
Riusuke Fukahori wuxuu soo saaray farsamo aan caadi aheyn si loo abuuro kalluun dahabi ah oo 3D ah iyadoo la isticmaalayo cusbo lagu shubay
Tabobar Video ah: Saamaynta Cilladaha Macluumaadka
Tabobar fiidiyow ah oo lagu barto sida loo adeegsado saameynta xogta cilladda ee ka socota barnaamijka Adobe Photoshop qaab fudud oo dhakhso leh.
Casharro Video ah: Saamaynta Indhaha Kalluunka ee Photoshop
Tabobar fiidiyow ah oo lagu barto sida ugu fudud ee loo adeegsado saamaynta Fisheye ee Adobe Photoshop iyada oo aan loo baahnayn Plugins ama add-ons.
Tabobar fiidiyow ah oo lagu barto sida loogu adeegsado saamaynta 3D halabuurkeenna qaab fudud oo wax ku ool ah iyada oo loo marayo isticmaalka Adobe Photoshop.
Tabobar fiidiyow ah oo lagu barto sida loo abuuro animation duufaan baraf ah Adobe Photoshop si fudud oo hufan.
Xulasho bilaash ah oo kalandarro hal abuur leh oo wax laga beddeli karo sanadka soo socda ee 2015.
Sawirada Xayeysiinta: Nidaamka nashqadeynta talaabo talaabo ah
Sideen ula kulannaa mihnaddeenna maalinba maalinta ka dambeysa si aan u noqon karno waxtar? Sidee habka naqshadeynta u raacayaa xirfadle?
Kiniiniyada sawirada ayaa ka mid ah aaladaha lagama maarmaanka u ah naqshadeeyayaasha garaafka oo haddii aan mid raadino, sumadda Wacom ayaa abuureysa tan ugu wanaagsan
Waxaan soo helnay 14 halabuur si wada jir ah ula helnay shabakada bulshada ee Instagram. 14 hal abuuro gabi ahaanba ka duwan kuwaas oo ku nasin doona hal abuurkaaga ilbiriqsiyo gudahood.
Uruurinta in kabadan labaatan kheyraad sawir gacmeed oo bilaash ah nooc kasta oo ganacsi ah.
8 xeerarka aasaasiga ah: ABC ee naqshadeynta garaafka
8 xeerar aasaasi ah oo naqshadeeye kasta uu ku xisaabtamo markuu shaqeynayo ama fulinayo mashruuc kasta.
Qalinka Scribble wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sawirato 16 milyan oo midabo
Qalinka Scribble waa qalin garanaya midabada dhabta ah iyadoo loo adeegsanayo dareemayaal si hadhow awoodi karaya inuu ugula sawiro warqad
Rinjiyeynta roobka ee shiraac ay sameeyeen Kohn, Djukaric iyo Imre Toth
Roobku waa mid ka mid ah dhacdooyinka saadaasha hawada ee inta badan kiciyay farshaxanno gaar ah sida saddexda aan ku soo ururinno qoraalkan
Sida loo horumariyo xirfadaheena qaabeynta sawirada
Sideen ku horumarin karaa xirfadaheyga qaabeynta qaabdhismeedka? Raac taxanaha talooyinka oo aad shaqo tagto.
Dareenka qoraalka: Baro inaad dhageysato sheekeeyaha ka dambeeya xarfaha
Waa maxay nooca xasaasiyadda? Maxay muhiim u tahay inaad u tixgeliso sidii naqshadeeye? Sideen u kobcin karnaa?
Sawir qaadis: Khaladaad fikradeed oo aad u caam ah
Soo uruurinta qaladaadkii ugu fikrada badnaa ee ka dhacay dunida sawir qaadista.
Fikradaha Hal-abuurka ah iyo kuwa aan caadiga ahayn: Shaqooyin aadan weligaa ku riyoon
Aruurinta fikradaha ganacsi ee ugu caansan uguna caamsan ee waligaa aad qiyaasi laheyd.
Sawirada Lili Chin ee 'Dogs of the World'
Lili Chin waxay ku meteleysaa sawirro taxane ah dhammaan meeraha canine ee meeraha ku yaal
Xirmo 100 kaar ganacsi oo bilaash ah
Xirmo lacag la'aan ah oo ka kooban 100 kaararka ganacsiga ah oo qaab PSD ah oo wax laga beddeli karo.
Ma taqaanaa qaybaha ka kooban nin? Baro anatomy qaabdhismeedka haddii aad rabto inaad noqoto qoraa yaqaan wanaagsan.
Buugaagta CorelDraw bilaash ah
Isku-dubbaridka buugaagta Isbaanishka dhammaan noocyada qaybta 'Coreldraw'.
Sirta faylalka tacliimeed ee wanaagsan
Maxaan ku xisaabtami karnaa marka aan abuureyno faylalkayaga oo aan iska ogaysiinno shirkadaha kale?
Qoysaska qaab qoraalka aasaasiga ah
Qoondaynta aasaasiga ah ee qoysaska font ee naqshadeeye kasta oo farshaxan iyo farshaxanle ah ay tahay inuu ogaado.
Farsamooyinka hal abuurka leh, sida loo abuuro fikradaha
Farsamooyin hal abuur leh si loo soo saaro fikradaha ku saabsan xayeysiinta. Baro fekerka u dhexeeya miyir-beelka iyo miyir-qabka si loo gaaro natiijooyinka asalka ah.
Redbubble, degel si aad u kasbato dakhli dheeraad ah oo naqshadeeye ahaan ah
Redbubble ayaa suurtagal u ah naqshadeeyayaasha inay kasbadaan dakhli dheeri ah bil kasta. Taajirnimo mahelaysid laakiin had iyo jeer way wanaagsan tahay inaad awooddo inaad hesho macmiil
Isku-darka iskudhafka ah ee Luke Robson
Isku soo wada duuboo farshaxamiistaha Luke Robson waa shaqooyin ka yaabiyay adeegsiga midabyo dhalaalaya iyo isku dhafka waxyaabo kala geddisan
Aasaas u ah sawir qaadayaasha: Shutter, xawaaraha xarkaha, furitaanka iyo f-no.
Muxuu kaameraddeenu ka samaysan yahay? Maxay yihiin santuuqa iyo diaphragm maxaase ay qabtaan?
Ma tahay qof hal abuur leh?
Qofka hal-abuurka leh waa kan had iyo jeer u fikira si kale, oo aan cuqdad qabin isla markaana leh sanduuq feker aan xad lahayn.
10 sawir gacmeedyo caadi ah oo kaa dhigaya inaad ruxdo
Isku-dubaridka sawir gacmeedyada qaab-dhismeedka qaabdhismeedka naxdinta leh ee calaamadeeyay hor iyo ka dibba adduunka farshaxanka.
Casharka fiidiyowga ee 'Lightroom' kaas oo aan ku baran doonno sida loo adeegsado saameynta Loomax halabuurkeenna qaab fudud oo xirfad leh.
Shey ama qalab noocee ah ayaan ubaahanahay inaan ka qaado sawir tayo leh? Waa maxay qalabka sawir qaadista xirfadeed?
8-da sawir ee ugu xiisaha badan taariikhda
Isugeynta sideeda sawir ee ugu indha sarcaadsan taariikhda sawir qaadista oo aan helin sharaxaad ilaa maantadan la joogo.
Sawirada qalin-ku-saleysan ee dhabta ah ee Monica Lee
Monica Lee, oo ah farshaxaniste reer Malaysia ah, ayaa isku soo bandhigaysa farshaxanimo farshaxanimo qurux badan oo sawir leh
Sawirro uu soosaaray naqshadeeyaha moodada Oscar de la Renta
Oscar de la Renta wuxuu lahaa xirfado sawir gacmeed oo aad u wanaagsan sida ku cad sawirradan
Koorsada Lightroom Casharka 5aad: Faahfaahin, Yaraynta Buuq iyo Diirad saarid
Koorsada Lightroom Casharka 5aad: Faahfaahinta qolka Lightroom. Sida loogu sawiro sawiradeena qaab cad oo fudud.
Falanqaynta qaabdhismeedka sawirada quraafaadka ah ee shineemooyinka naxdinta leh (I)
Falanqaynta qaabdhismeedka sawir gacmeedyadii ugu naxdinta badnaa ee taariikhda shineemooyinka.
20 sawir oo beddeli doona sida aad nolosha u aragto
Uruurinta labaatan sawir oo beddeli doonta habka aad u fahamto nolosha, aadanaha iyo adduunka.
Waa maxay midabka loo tuuray iyo sida loo saaro?
Fikradda midab kabka ayaa aasaas u ah sawirqaade ama naqshadeeye kasta. Ma taqaanaa sida loo shaqeeyo ama wax looga beddelo midabka sawirka midabka leh?
Xidhmada Dhiig Bixinta ee qaabka PNG
Ku buuxi in ka badan 20 buufinta dhiigga iyo nabarrada qaabka PNG ee ku habboon ka shaqeynta Adobe Photoshop.
Jirka bani'aadamku waa aasaaska shaqada farshaxanka ee Antony Gormley oo aan kaaga tusinayno qoraalkan ku jira Creativos Online
100 Casharro Cajiib ah oo loogu talagalay Halloween (I)
Isku-darka 100 casharro aan caadi ahayn oo loogu talagalay Halloween si loo abuuro naqshado heer sare ah oo leh mugdi, cabsi ama sharraxaad qurux badan.
Isku-duwidda tusaalooyinka bilaashka ah si loo abuuro Xaashida iyo waraaqaha loogu talagalay Halloween.
Tabobar fiidiyow ah oo lagu baranayo sida loo mariyo ilmada dhiigga, nabarrada iyo midabka midabkeenna jilicsan ee ku jira aaladda Adobe Photoshop.
Soo uruurinta buugaagta oo ku qoran PDF iyo Isbaanishka Adobe InDesign, bilaash.
5 kaararka ganacsiga ee leh ulaha ujeedadooda ugu weyn markay tahay layaabka macmiilka
Naqshadaynta Buugga: Qaybaha Xidha
Ma xiisaynaysaa hawsha nashqadeynta buugga? Si tan loo sameeyo, waa inaad ku bilowdaa inaad ogaato walxaha ka kooban sheyga iyo shaqadiisa.
Xirmo 50 saamayn gaar ah oo loogu talagalay Adobe Kadib Raadka
Xirmada konton saameyn gaar ah oo loogu talagalay barnaamijka bilaashka ah ee Adobe After Effects.
10 Qalabka Photoshop waa inaad isku daydaa (I)
Xulitaanka toban shey oo muhiim u ah Adobe Photoshop.
Naqshadeynta tifaftirka: Noocyada nidaamyada shaashadda
Naqshadeynta tifaftirka waxaan ku sawiri karnaa waxyaabahayaga ka dib qaabab kala duwan, waxaa muhiim ah in la ogaado kala soocida nidaamyada reticular.
Adobe Kadib Raadka CS3, CS4, CS5, CS6 iyo buugaagta gacanta ee Isbaanishka
Soo ururinta buugaagta adobe ka dib saamaynta Isbaanishka iyo bilaashka ah.
Xirmada cadayga astaamaha ee Photoshop (I)
Xidhmada Mega ee lixda buraash ee lagu garto burushka (burushyada baalasha, timaha, baalasha, indhaha, maqaarka ...)
Muxuu yahay nidaam shabaggu ka samaysan yahay? Sideen ku horumarin karaa mid ka shaqeynaya qaabeynta tifaftirka?
Isku-darka sideed casharro xirfadeed oo loogu talagalay la shaqeynta arjiga sawir-qaadaha adobe
Tabobar fiidiyow ah oo lagu barto sida loola shaqeeyo Photoshop si loogu adeegsado qurxinta dhijitaalka ah qaab macquul ah jilayaashayada.
Fiidiyowga fiidiyowga Isku-dhafan Biyo-biyoodka Isku-dhafan ee Adobe Photoshop
Casharrada fiidiyowga ah ee aan ku baran doonno sida loo adeegsado saameynta midabbada isku dhafan ee sawirradeenna.
Masterka ee Farshaxanka Origami waxaa sameeyay Artist Eric Joisel
Erico Joisel waa sayid la aqoonsan yahay ee farshaxanka Origami oo ku saleysan warqad oo ah xarunta wax walba
Mustaqbalku Waa Halkan: Animation-ka 3-aad ee ugu macquulsan netka
Adduunyada teknolojiyaddu waxay ku sii kordheysaa xawaare la yaab leh. Ma ogtahay inta aan karti u leenahay inaan u aadno adduunka animation-ka 3D?
14 shabakado sawir furan oo tayo sare leh
14 shabakado sawir furan oo furan oo loogu talagalay dhammaan noocyada mashaariicda iyo shaqooyinka
Waa maxay saameynta Moirè?
Ma ogtahay waxa uu yahay moirè saamaynta? Raadi sida ay u soo baxdo, sida loo baabi'iyo iyo sida loola shaqeeyo.
Waa maxay shabakadda ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee dhiirrigelinta farshaxanka iyo raadinta macaamiisha?
Shabakadaha warbaahinta bulshada ee loogu talagalay dhiirrigelinta farshaxanka sida Behance, Dribble ama Instagram, ayaa macaamiisha heli kara
10 buugaag muhiim u ah naqshadeeyayaasha garaafka
Isku soo uruurinta toban buug oo habboon oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafyada iyo xirfadlayaal u heellan adduunka sawirrada.
Xirmooyinka 40 moodeellada xuduudaha tacliimeed ee PSD
Isugeynta afartan qaab-dhismeedyo tacliimeed iyo xirfadeed qiime aad u hooseeya.
Qalabka sawir qaadista ee xirfadeed: qalabkee ayaan u baahanahay?
Maxay tahay qalabka sawir qaadashada ah ee aan haysto haddii aan doonayo inaan naftayda u huro sawir ahaan si xirfadaysan?
Awoodda midabka ee qaabeynta astaanta
Midabka naqshadeynta astaanta ayaa muhiim u ah astaanta si ay u saameyso macaamilka iyo badeecada la bixiyo.
Buugga Adobe Illustrator ee bilaashka ah: CS3, CS4, CS5, CS6, CC
Xirmooyinka buugaagta bilaashka ah iyo Isbaanishka ee Adobe Illustrator. Qaybaha CS3, CS4, CS5, CS6 iyo CC.
3 koorsooyin bilaash ah oo loogu talagalay Adobe InDesign
Isku soo uruurinta seddex koorso oo bilaash ah oo bilaash ah si ay noogu soo bandhigto adduunka qaabka leh barnaamijka Adobe InDesign.
10 sheybaarrada waraaqaha bilaashka ah ee qaabka PSD
Isku-dubaridka toban shey si loo abuuro boodhadh xayeysiis ah iyo xaashiyaha loogu talagalay dhacdooyinka, xafladaha iyo iibinta wax soo saarka. Looga baahan yahay naqshadeeye kasta.
Abuuritaanka qaabab aasaasi ah oo leh Adobe Illustrator
Maanta waxaan ku barayaa inaad sameysid qaabab joomatari aasaasi ah oo aad wax ka qabato, aaladaha loogu talagalay.
5 halyeeyo nashqadeysan oo garaafyo ah oo shaqooyinkooda gaarka ah siiyay
5 halyeeyo naqshadeysan oo garaafyo ah oo hal dhibic ka mid ah shaqadooda gebi ahaanba beddelay dhabbaddoodii
500 talooyin sawir dhijitaal ah, tabaha, iyo farsamooyinka
Ma garaneysaa buugga 500 talooyin, tabaha iyo farsamooyinka sawirrada dhijitaalka ah? Haddii aad ku soo galayso adduunka farshaxanka garaafka waa inaad.
Sidee loogu ilaaliyaa sawiradayda xuquuqda lahaanshaha? (I)
Ilaalinta shaqadeena waxay muhiim u tahay sida wanaagsan ee aan u qabano. Sidaa darteed, haddii aad tahay farshaxan muuqaal ah, waxaa lagama maarmaan noqon doonta inaad ogaato sharciga xuquuqda lahaanshaha.
9 qalab oo lagu beddelo Adobe Fireworks
9 qalab kale oo lagu beddelo Adobe Fireworks
Adobe Illustrator: Maxay tahay maxaase loogu talagalay?
Sawirqaade waa barnaamijka sawirka vector-ka Adobe ee jiray in ka badan 25 sano, isagoo tixraac cad ka ah warshadaha naqshadeynta.
Farshaxanka Waraaqda: Mabaadi'da Naqshadeynta Sawirka
Farshaxanistu wuxuu na baraa iyadoo la adeegsanayo farshaxanka waraaqda mabaadi'da boorarka
Farshaxanka cajaladda cajaladda ayaa daboolaya
Naqshadda gadaal ee cajaladaha cajaladdu waxay la mid noqon kartaa fursad lagu helo fikrad ku saabsan guridda
Naqshadeeyaha Affinity waa softiweer cusub oo naqshadeynta garaafka ah oo la jaan qaadi kara Adobe Illustrator laftiisa
Nooca 'Adidas' waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan calaamadiisana si wanaagsan ayey u wada aqoonsan yihiin dhammaan seddexdeeda diillimood
Baro inaad isticmaasho shaandhada iskudhafka polar
U adeegso shaandhaynta iskudhafka 'polar iskuduwaha' si aad u sameysid sawirro iskudhaf ah oo leh sawir-qaade
Adeegsiga qalabka qalinka ee ku jira Adobe Photoshop
Maanta waxaan sii wadi doonnaa inaan ka hadalno aaladda wax lagu sawiro ee Adobe Photoshop, iyo gaar ahaan fursadaha horumarsan ee qalabka Pen.
Sidee loo sameeyaa warqadda?
Baro sida loogu isticmaalay habka ugu isticmaalka badan adduunka in lagu qoro joogitaankiisa: Waraaq.
5 xeerar dahabi ah si loo abuuro far waaweyn
5 xeerar dahabi ah oo ay yiraahdeen farshaxanno khibrad u leh cilmiga qoraalka
Waa maxay iyo sida loo isticmaalo Adobe Kuler
Maanta waxaan soo bandhigayaa arjiga, sida lagu bilaabo la shaqeynta.
Qalabka ugu wanaagsan ee lagu abuuri karo qoraalkaaga
4 qalab si aad u sameysato qaab qorid kuu gaar ah taasna waxay muujineysaa sida awoodda loo abuuro noocyada font ay isu beddeleyso
Sida loo adeegsado habka loo yaqaan 'Short mask' ee Photoshop
Maanta waxaan kuu keenayaa casharradii ugu dambeeyay ee fiidiyowga ah ee aan ugu tala galay aaladaha xulashada, anigoo ah aaladda aan maanta keenayno, labadaba kaabaya kuwa kale, iyo qaab kale oo loo sameeyo. Maanta waxaan kuu soo gudbinayaa boostada, Sida loo isticmaalo habka loo yaqaan 'Quick Mask' oo ku yaal Photoshop.
Khayaaliga aan la dabooli karin ee sawirada Li Hongbo
Li Hongbo waa farshaxan yaqaan si loo ogaado, oo leh dammaanad gaar ah oo loogu talagalay waraaqda iyo dib-u-sameynta farshaxannada ugu quruxda badan ee waraaqaha
20 kaadhadh ganacsi oo casri ah dhammaan noocyada xirfadleyda iyo shirkadaha
Farshaxanada ugu kala duwan ayaa keena kaararka ganacsiga ee asalka ah iyo kuwa hal abuurka leh
5 tusaale fanaaniinta naqshadeynta qurxinta
Naqshadaynta qurxinta ayaa ah farshaxanno qarniyo jirtay oo in badan nala joogay. Shan farshaxan-yahanno ah oo muujiya sida ay naqshadoodu u gaarka tahay
Sida loo isticmaalo qalabka xulashada Photoshop
Maanta waxaan baran doonaa sida loo isticmaalo qalabka xulashada ee ugu caansan Photoshop. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican ugu maamusho naftaada barnaamijka.
4 tusaalooyin aan caadi ahayn oo farshaxanka jajabka ah
Afar farshaxan oo leh farshaxan jaban sida mid ka mid ah goobahooda muhiimka ah markay muujinayaan dhammaan hal-abuurkooda joomatari noocan ah
Sida loo sameeyo banner dhaqaaqa Photoshop si fudud 2 (gabagabo)
Maanta waxaan ku dhamaynaynaa casharka fudud ee fiidiyowga ah kaas oo aan ka sameysanay calan, iyo halka aan ku soo baranay sida loo isticmaalo qalabka waqtiga.
Xirmo bilaash ah oo 20 asalka joomatari ah
Xirmo bilaash ah oo labaatan joomatari ama polygonal asalka u fiican in ay ka shaqeeyaan dhammaan noocyada mashaariicda.
Cubist Weekend: 10 Casharro Sare (II)
Isku-darka casharrada cabiraadaha ee Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator. Miyaad jeceshahay inaad barato inaad ka shaqeysid fikradda isku-xirnaanta?
Cubist Weekend: 10 Casharro Sare (I)
Cubism: 10 Boodhadh Waxyoon ah
Isku-duwidda toban boodhadh oo dhiirrigelin ah oo ku jira qaabka dhuumaha. Naqshadeynta sawir gacmeedka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay xilligan xilligii avant-garde.
Cubism: Kumaa yidhi xisaabtu farshaxan maahan?
Maxaad ka taqaan kuyuub? Sidee ayey saameyn ugu yeelatay naqshadeynta garaafka iyo farshaxanka dambe? Hordhaca fikirka duurjoogta ah ee kulaylka.
Scribus: Barnaamijka qaabeynta bilaashka ah
Ma taqaanniin barnaamijka qaabeynta bilaashka ah ee loo yaqaan 'Scribus'? Marnaba ma habsaanto haddii farxaddu wanaagsanaato, halkan waxaan kuugu soo bandhigayaa barnaamijka iyo buugiisa rakibidda.
Jilayaasha Bruce Timm ee Batman: Taxanaha Animated
Bruce Timm wuxuu abuuray astaamaha badankood mid ka mid ah taxaneyaasha ugu waaweynaa ee dhaqdhaqaaqa ee waqtiga oo dhan: Batman taxanaha firfircoon
Tutorial si aad u barato sida wax looga abuuro xoqitaanka, ku kaydi kombiyuutarkayaga oo aad si toos ah ugu adeegsato faylal fara badan.
Maanta casharradan fiidiyowga ah, waxaan ku bari doonaa sida loo sameeyo loona diyaariyo mashruuc lagu abuurayo calan leh barnaamijka Adobe Photoshop.
Tababarka Adobe Photoshop si loo barto nooleynta iyo shakhsi ahaanta shey si macquul ah loo daryeelo arrimaha isdhexgalka si loo siiyo xaqiiqda.
20 Casharrada Surreal Cajiibka ah (II)
Isugeynta 20 casharro layaab leh oo qumman si looga shaqeeyo fikradda isdaba-marinta iyadoo loo marayo khalkhalgelinta sawir
Surrealism: Boodhadhyo dhiirigelin leh
Ururinta boodhadhka xilligan xaadirka ah ee sal-dhigida, oo ku habboon inay na dhiirrigeliyaan oo ay fahmaan saldhigyada bilicsanaanta qaabkan.
20 Casharrada Surreal Cajiibka ah (I)
U-guuritaanka habraaca quruxda dumarka qarniyo badan (II)
Dib-u-eegista isbeddelka taariikhiga ah ee buugga quruxda intii lagu jiray sannadihii XX iyo XXI. Sidee quruxda quruxda badani isu beddeshay sannadihii la soo dhaafay?
Maareynta Midabka: Metamerism
Waa maxay metamerism? Sidee loola dagaallamaa? Waa fikrad aad u muhiim ah marka ay tahay inaan ku dadaalno maaraynta midabka daabacaadda.
Xirmooyinka Bixinta Bilaashka ah ee Photoshop
Xirmo bilaash ah oo 50 dhimbiillo ah PNG iyo JPG qaab ku habboon in loo isticmaalo Adobe Photoshop. Adeegsiga shaqsiyeed iyo ganacsi.
U-guuritaanka habraaca quruxda dumarka qarniyo badan
Isku-dubaridka buundooyinka quruxda dumarka ee taariikhda adduunka oo dhan Sidee ayay ahayd, ahaan jirtay oo ahaan doontaa haweeney qurux badan marka laga eego dhinaca farshaxanka?
Xulashada 10 fiilooyin wanaagsan oo loogu talagalay Saameynta Kadib (I)
Isku-darka toban qalab muhiim ah oo ka shaqeynaya heer xirfad leh Adobe After Effects. Haddii aad tahay naqshadeeye, ma seegi kartid.
Isku-duwidda dhacdooyinka taariikhda xayeysiinta. Laga soo bilaabo asalkeedii ilaa 1955. Weli ma ogi waxa xayaysiiskii ugu horreeyay ahaa?
Tababarka Adobe Photoshop si aad u barato sida loo abuuro saameynta xawaaraha sawiradayada oo aan u siiyo halabuurkeenna firfircooni dheeri ah.
Uruurinta farsamooyinka waaweyn ee qancinta xayeysiinta. Aad waxtar u leh noo soo bandhigida isgaarsiinta xayeysiinta.
Mega Pack: 5Gb oo ah kheyraad loogu talagalay naqshadeynta shabakadda BILAASH
Isku-darka in ka badan shan gigab oo kheyraad loogu talagalay naqshadeeyayaasha, oo ku habboon naqshadeynta websaydhka isla markaana ka shaqeeya mashruucan noocan ah.
Tababarka Photoshop: Saamaynta Harris Shutter
Casharro muujinaya sida loo adeegsado saameynta Harris Shutter ee ka kooban isku-dubbariddeena iyadoo loo marayo dalabka Adobe Photoshop Si fudud, dhakhso, fudud.
Sawirada xagaaga ee waxyiga leh
Isku soo aruurinta toban boodhadh nooca xagaaga ah oo ku habboon abuurista xayeysiis iyo waraaqo xayeysiis ah. Ku dhiirrigeli iyaga!
5 koorsooyin naqshadeynta garaafka ah oo bilaash ah
Isku-darka shan koorso oo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeynta garaafka. Ma rabtaa inaad ku bilowdo aaladaha naqshadeynta ee ugu caansan? Qodobkaani adiga ayuu ku xiiseeyaa
Casharbar: Isku dar Sawirada Sawirada iyo Sawirada Adobe Photoshop
Casharkaan waxaan ku arki doonaa sida laysugu daro sawirada Adobe Photoshop si loo abuuro halabuur leh walxaha vector-ka iyo bitmaps-ka.
Farsamooyinka lagu abuuro fikradaha (III): Isku xidhka cilmiga
Isku-duwidda habraacyada si loo abuuro fikrado cusub oo looga shaqeeyo hal-abuurkeenna.
Tababarka Photoshop: Ku -fiiri Sawirrada Isticmaalka Webka
Cashar barasho si loo barto sida loo wanaajiyo sawirada loo qaadi doono internetka. Waxaan ku eegi doonnaa dejinta JPEG, PNG iyo GIF.
Farsamooyinka abuurista fikradaha (II): Imtixaannada hal-abuurka
Isku-duwidda habraacyada fikirka dambe si loo abuuro fikrado cusub ugana shaqeeyaan hal-abuurkeenna.
20 naqshadaha baakadaha layaabka leh
Isugeynta 20 nashqadeynta baakadaha hal-abuurka ah ee ka dhex muuqda dhinaca garaafka. Pèrfectos si ay noogu dhiirigeliso iyaga.
Farsamooyinka soo saarista fikradaha (I): Fikirka dambe
Baro sida loo sameeyo qoraalka buufinta ee Photoshop
Baro sameynta qoraalka aerosol ee Photoshop qaab fudud iyo adeegsiga dhammaan agabyada aad ugu baahan doontid. Ka dhig naqshadahaaga kuwo hal abuur badan.
HD bangiyada video stock (I)
Isku-darka shanta bangi ee fiidiyowyada oo ay ku jiraan HD iyo Full HD ka kooban shaqadeena xirfadeed.
+ 50 kheyraad bilaash ah
Isku-darka in ka badan konton kheyraadka ugu yar ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka, oo ay ku jiraan dulinka, boodhadhka iyo astaamaha.
Toddobaadka dhammaadka Minimalist: 10 casharro sare
Isku-duwidda toban casharro si loo abuuro qaabab-u-kooban qaab-dhismeed, laga bilaabo boodhadhka illaa bogagga shabakadaha ama faylalka.
Mabaadi'da iskudhiska: Tilmaamaha Farshaxanka Sawirka (II)
Dib u eegista tobanka mabaadi'da wax ku oolka ah ee wax ku oolka ah si loo wajaho abuurista nooc kasta oo halabuur ah. Ma taqaan iyaga?
Mabaadi'da iskudhiska: Tilmaamaha Farshaxanka Sawirka (I)
10 tusaalooyin la yaab leh oo xayeysiinta subliminal
Toban tusaale oo ah soo-jeedinta xayeysiinta subliminal ee tixraaca u ah cunsurrada iyo falalka galmada si loo saameeyo doonista daawadayaasha.
10 qaladaad layaableh oo kujira warshadaha filimada
Isku soo wada duub toban qalad oo shaneemo la yaab leh oo ku jira filimaan aad u fiican oo aanad u maleynaynin.
Xirmooyinka Gothic: + 50 ilaha khiyaaliga ah ee bilaashka ah ee qaabka PSD
Xirmooyinka Gothic ee loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka leh feylasha qaab PSD ah, oo la soo dejin karo iyo in ka badan konton cunsur wax laga beddeli karo
Toddobaadka Gothic: 10 Casharrada Waxtarka Sare
Isku-duwidda toban tabobarro saamayn gaar ah oo Gothic-gebi ahaanba bilaash ah. Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay!
25 arrimood oo kaliya ayaad fahmi doontaa haddii aad tahay naqshadeeye
Anecdotes, kaftanka iyo xiisaha ku wareegsan adduunka ee naqshadeynta garaafka. Ku habboon in la bilaabo usbuuca dhammaadkiisa lugta midig.
StayFocusd, codsi aad u faa'iido badan in si fiican looga shaqeeyo
StayFocusd waxay maamushaa inay kordhiso wax soo saarkaaga adoo ka hortaagaya waxyaabaha kaa mashquulin kara iskaa wax u qabso, oo ah codsi waxtar badan u leh naqshadeeyaha.
Cilmu-nafsiga midabka: Xiisaha ku saabsan asalkiisa
Xiisaha taariikheed ee ku saabsan cilmu-nafsiga midabka iyo asalka qaar ka mid ah macnayaasha aan maanta u nisbeyno midabada.
Xirmooyinka 'Retro pack': 50 faylal oo ah qaab PSD BILAASH ah
Isku-duwidda 50-ka faylal ee qaabka dib-u-eegista .psd qaabka dib-u-habboon ee loogu talagalay mashaariicdayada ama in lagu dhiirrigeliyo iyaga oo si buuxda wax loo saxo
Guridda vs. qaabka gadaal: 15 tusaalooyin dhiirigelin leh
Isugeynta shan iyo toban waxay u shaqeysaa qaab dib u habeyn iyo qaab guris ah oo kugu dhiirrigalin doonta markaad ka shaqeyneyso boorarka iyo mashaariicda kale.
Isku-dubbaridka toban casharro qaab-dib-u-celin ah oo loogu talagalay dhammaan noocyada mashruucyada: Boorarka, calaamadaha, khariidadaha, noocyada ... Ku raaxayso iyaga!
Bilaabida Hagaha Waxyaabaha Smart-ka ah ee Photoshop. Dib u eegis dusha sare ah oo ku saabsan fikradeeda, isticmaalkeeda, la shaqeynta walxaha casriga ah iyo miirayaasha.
Shan hab oo lagu kordhiyo muuqaalka sawiradeena iyo montages-ka Adobe Photoshop. Si fudud, dhakhso leh, xirfadle ah.
Casharka fiidiyowga: Saamaynta waraaqda ee Adobe Photoshop + Saameynta Kadib
Tababbarka fiidiyowga si loo abuuro animation nasasho warqad iyadoo la adeegsanayo Adobe Photoshop iyo Adobe After Effect iyada oo aan loo baahnayn plugins ama kordhin.
Shabakadda InDesign | Casharro loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaabeynta
Kahor intaadan bilaabin shaqadaada qaabeynta qaabeynta tifaftirka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa shabakadda InDesign ay tahay.
10 waa inay lahaadaan barnaamijyo loogu talagalay sawir qaadayaasha
Isku-dubbaridka toban codsi oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay hiwaayadda iyo sawir qaadayaasha xirfadleyda ah. Barnaamijyada labada PC iyo casriga ah.
20 tusaalooyin xayeysiis hal abuur leh
Uruurinta labaatan tusaale oo xayeysiis hal abuur leh. Soo jeedimo la yaab leh oo loogu talagalay in lagu soo jiito dareenkeena si sixir ah.
Khuraafaadka buugga majaajilada ah: Safar laga soo bilaabo 1929 (II)
Isku-darka khuraafaadyada majaajilada ah illaa 1929. Qaybta labaad ee ururintan oo qorayaasha sida Stan Lee iyo Quino ay fiiro gaar ah ku helaan.
Waa maxay Kaargocollective maxaanse ugu abuurayaa faylalka faylalka internetka ku yaal halkaas?
Tani waa su'aal inbadan oo naga mid ahi waligood isweydiiyeen. Qoraalkan waxaad ku arki doontaa fikrad shaqsiyeed oo ku saabsan waxa ay tahay Kaargocollective (faa iidooyinka iyo qasaaraha).
Khuraafaadka buugga majaajilada ah: Safar laga soo bilaabo 1929 (I)
Isku-dubaridka wakiillada ugu caansan iyo kuwa caanka ka ah adduunka majaajillada. Faahfaahinta iyo macluumaadka ka soo baxa majaajilooyinka majaajillada ah ee adduunka ka yaabiyay.
Takhasus u leh qaabeynta qaabdhismeedka
takhasuska ayaa muhiim u ah xirfad kasta. Halkan waxaa ku kala soocid ah laamaha waaweyn ee naqshadeynta garaafka.
52 sawir oo cajiib ah iyadoon la isticmaalin Photoshop
Isugeynta 52 sawir oo cajiib ah iyadoon la isticmaalin Photoshop ama barnaamij kale oo lagu qurxiyo sawir. Waxaa mudan in la arko.
Videoscribe waa codsi kuu oggolaanaya inaad ku abuurto fiidyowyo HD ah oo leh xayeysiis xayeysiis ah qaab gebi ahaanba macquul ah. Miyaadan ogayn?
Isku soo uruurinta toban casharro bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Illustrator oo ku habboon barashada sida loo isticmaalo arjiga.
Waxaad ubaahantahay inaad sameyso faylalka internetka oo aadan aqoon sida. Halkan waxaad ku arki doontaa 10 xayeysiisyo wanaagsan oo lagu sameeyay Cargollective waxaadna heli kartaa casuumaad bilaash ah.
Wax soosaarayaasha ay tahay inaad raacdo barta 'Instagram' si maalin walba waxyi loo helo
Waad ogtahay in Instagram ay tahay il muhiim ah oo dhiirrigelin ah, laakiin waad cusub tahay oo ma ogid dadka qaybta ku jira. Raadi cidda aad raacayso barta Instagram halkan.
U beddelo naqshad InDesign ah qaab-qoraal ah 6 tallaabo
Macmiilkaagu wuxuu u baahan yahay inuu wax ka beddelo qoraalka xarfahooda: haddaba, baro inaad ka sameysato naqshad erey naqshadeyntaada InDesign. Si dhakhso leh oo fudud!
Xagee ku bartaa naqshadeynta garaafka? 14-ka xarumood ee ugu fiican Spain
Isku-dubaridka ugu fiican 14 xarumood ee Isbaanishka ah si loo barto naqshadeynta garaafka. Kala soocida ay sameysay bulshada jaamacada Patata Brava.
100 xigasho farshaxan kastaa wuxuu u baahan yahay inuu maqlo
100 xigashooyin laga soo qaatay dadka muhiimka ah ee taariikhda caalamiga ah. Dhiirigelin iyo ku habboon qof kasta oo hal-abuur leh, farshaxan kasta.
Casharbarka: Naqshadeynta Calaamadaha Tim Burton ee AI (3)
Tilmaamaha Adobe Illustrator si loo qaabeeyo jilayaasha qaab-dhismeedka Tim Burton hab fudud oo macquul ah oo loogu talagalay bilowgayaasha. Talaabo talaabo.
13 Talooyin ku saabsan qaabeynta naqshadeeye kasta oo ay tahay inuu tixgeliyo
Immisa nooc ayaan u isticmaalaa naqshadeynta? Waa maxay cabir Waa kuwee dhinacyada ay tahay inaan daryeelo? Halkan ka aqriso talooyinka qoraalka ee naqshadeeye ahaan ay tahay inaad ogaato.
Spiekermann 8-da Tilmaam ee nooca (Infographic)
Haddii aad rabto inaad nafsaddaada u hurto naqshadeynta garaafka, waa inaad tixgelisaa 8-taan talo-bixin ee uu qoray Erik Spierkermann, oo ah caan-yaqaan si-yaqaan caan ah.
Casharbarka: Naqshadeynta Calaamadaha Tim Burton ee AI (2)
Casharbarka: Naqshadeynta Calaamadaha Tim Burton ee AI (1)
Xulista 20 casuumaadaha arooska ugu wanaagsan
Uruurinta 20 casuumaadaha arooska wanaagsan sanadkaan waxaan ku falanqeyneynaa waxyaabaha ugu soo noqnoqda ee naqshadaha: Kala saar naftaada!
69 sawir waa inaad aragtaa kahor intaadan dhiman
Isugeynta 69 sawir oo naxdin leh oo ku saabsan taariikhda aadanaha. Dagaallo, jacayl, isku soo beegid, dhacdooyin taariikhi ah ... xoog badan!
Shabakado bulsho oo gaar ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka
Shabakado badan oo bulsheed ayaa naga caawiya inaan wadaagno shaqadeena, qiimeynno, helno dhaleeceyn iyo dalabyo shaqo. Kaliya loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka.
5 Noocyada Sawirka Kaladuwan ee Kuu Dhiirrigelin Doona
Maanta waxaan kuu keenaynaa 5 qaabab kala duwan oo sawir ah oo kugu dhiirrigelin doona: siyaabo kala duwan oo looga fekero midabka, sawir, curinta, qabashada ...
25 Halku dhigyo calaamadeeyay hor iyo kadib
Isku soo wada duuboo halku dhigyo calaamadeeyay kahor iyo kadib aduunyada xayeysiinta oo tusaale iyo dhiirigalin u ah naqshadeeyayaasha cusub.
Ku shub waraaqaha midabka ah Sawirka CS6
Casharro sharraxaad ah oo ku saabsan sida loo rakibo waraaqaha midabka ee uu soo saaray Adobe Kuler qaab .ase iyadoo la adeegsanayo Adobe Illustrator CS6
25 Xiisado ku saabsan naqshadeynta garaafka
25 xiisaha ku saabsan adduunka ee naqshadeynta garaafka, sameynta dib-u-eegis yar oo taariikhi ah iyo isbeddel ee edbintan.
10 xayeysiisyada khadka tooska ah ee xirfadlayaasha naqshadeynta websaydhka
Hoos waxaan ka xulanay 10 shabakadaha internetka ee 2014 ee naqshadeeyayaasha webka, horumariyeyaasha, UI iyo UX naqshadeeyayaal iyo xirfadlayaal isku mid ah.
Xulista 6 shaqooyin sumadeed wanaagsan
Waxaan kuu dooranay 6 shaqooyin sumadeyn ah si aad u aragto, u lafo-gurto oo loo waxyoodo: baararka, dukaamada jiiska, dukaammada, aqoonsiyada shaqsiyadeed iyo inbadan.
GoAnimate: Abuur kartoonno waqtiga rikoodhka ah
GoAnimate waa degel na siisa suurtagalnimada abuurista kartoonada 2D iyo animations shaqooyin kala duwan. Ma taqaan isaga?
25 calaamadaha hadda jira si ay kuugu dhiirrigeliyaan
Anaga oo og dhibaatada ay leedahay in la sameeyo, waxaan kuu soo xulnay wadar ahaan 25 astaamo oo la abuuray sanadkii la soo dhaafay si aad u aragto, wax u barato una lafo-gurto.
Dib-u-cusbooneysiinta hal-abuurka loogu talagalay naqshadeeyayaasha websaydhka, naqshadeeyayaasha garaafka, sawir qaadayaasha iyo waxyaabo kale oo badan
17 Dib-u-cusboonaysiin Hal-abuur ah oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka ku dhiirrigelin doona markaad naqshadayso oo aad adigu samaysato. Kala sooc naftaada oo shaqo ka hel resumeygaaga!
18 Buug oo loogu talagalay Naqshadayaasha Sawirka iyo Naqshadayaasha Webka
Maanta waa maalintii buugga, waxaanan dooneynaa inaan ku qabanno annagoo kugula talinayna taxane aqrin oo adiga xiiso kuu yeelan doona. 18 Buugaag loogu talagalay naqshadeeyayaasha.
Sawirka Farshaxanka: Casharrada Laydhka Qaybta II
Casharro ku saabsan farsamooyinka ugu wax ku oolka badan iyo jagooyinka si loogu iftiimiyo sawir gacmeedka farshaxanka wanaagsan ama fiidiyowga istuudiyaha ah.
Sawirka Farshaxanka: Casharrada Laydhka Qaybta I
Naqshadaynta Dareenka: Farshaxanka, cilmu-nafsiga iyo hal-abuurnimada
Dareenku waa cunsur aad muhiim u ah marka aad ka shaqeyneyso adduunka naqshadeynta. Kansei injineernimada iyo naqshadeynta shucuurta ayaa naga caawin doonta inaan tan sameyno.
Tababarka Photoshop: Dhageysiga Qoraalka Qaybta II
Tababbarka Adobe Photoshop si loo abuuro farshaxan sawir ah oo looga shaqeeyo qoraalka dhagxaanta qaab fudud oo macquul ah.
Isku duwidda 10 fiilooyin quruxsan oo wanaagsan oo loogu talagalay Adobe Photoshop oo naqshadeeye kasta uu rabo inuu ogaado.
Isbeddellada midabka ee naqshadeynta garaafka 2014: Midabada Pantone
Midabbada Pantone inta lagu jiro xilliga Gu'ga 2014. Waxay ku habboon tahay naqshadeeyayaasha dhammaan noocyada, si ay u doortaan isku-darka ugu habboon ee abuuritaankeenna.
20 Casharro si aad u dhammaystirto xirfadahaaga Photoshop
Ku barashada casharradan waxay kaa dhigeysaa inaad dareentid karti badan, gudaha dhexgal talaabooyinka qaarkood, iyo hagaajinta maarayntaada Photoshop.
Waa maxay? Sideen ku sameeyaa? Tilmaame kooban oo loogu talagalay macaamiisha sida loo soo koobo (ugu yaryahay) naqshadeeyaha si uu shaqo fiican u qabto. Gali oo aragtidaada ka dhiibo.
Vectors, sumadaha, calaamadaha iyo astaamaha qaab retro ee bilaashka ah!
Kheyraad bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaabdhismeedka gadaal. Isku-darka 110 walxood oo noocyo kala duwan ah si looga shaqeeyo halabuur guridda gebi ahaanba bilaash ah.
Timaha jarista ee Photoshop CC: Fudud, Deg Deg iyo Xirfad Leh
Tababarka fiidiyowga ee Photoshop si aad u sameyso jaritaanno xirfad leh si sax ah hab fudud.
Photoshop CC Video Tutorial: Isdhaxgalka Saamaynta, Wajiyadda Lakabka, iyo Kaladuwanaanta
Tababbarka fiidiyowga ee Adobe Photoshop CC si loo barto in lagu barto aaladda Masks iyo Kala duwanaanta qalabka.
Dhammaanteen waa inaan qaabeyno boodhadh ka mid ah: halkan ka hel dhiirrigelinta lagama maarmaanka ah ee leh 12 boodhadh hal abuur leh oo aan kaa tagi doonin danayn la'aan.
Iyo inaan ku dhammeysano casharradan casharrada ah Sida loo sawiro loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop, waxaan dhammeyn doonnaa shaqadeenna dhijitaalka ah.
Qormooyinkan taxanaha ahi waxay kaa caawin doonaan inaad baraan macmiilka muhiimada ay leedahay samaynta kooban ee naqshadeynta si loo helo natiijooyin wanaagsan. Aqri oo ka dhiibo aragtidaada.
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 6-aad)
Adobe Photoshop wuxuu leeyahay aalado dhowr ah oo loogu talagalay midabaynta iyo hoos u dhigista sawiradeena, casharkaan waxaan ku dabaqi doonnaa dhowr ka mid ah.
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 5-aad)
Waxaan kusii soconeynaa casharka Sida loo sawiro loona sawiro sawiradeena Adobe Photoshop qeybtiisa shanaad, iyadoo qalinka lagu duugay sawirka oo dhan.
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 4aad)
Nidaamka wax lagu duubo ee Adobe Photoshop waa wax aad u raaxo badan oo madadaalo leh, oo ku dhex jira nidaam hawleed dheeri ah oo firfircoon.
Qeybtii hore ee casharkaan, waxaan ku aragnay iskudhafka aaladaha Photoshop, si loogu sawiro sawiradeena natiijo xirfad leh.
Hadda waxaan bilaabi doonnaa inaan si toos ah uga shaqeyno sawirka, si gaar ah, ka hor intaanan bilaabin farshaxanka-xariiqa aan u soconno ...
Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop
Suurtagalnimada inaan ku shaqeyno sawirkeenna Adobe Photoshop waa mid ka mid ah tayada ugu wanaagsan ee barnaamijkan. Casharkaan waxaad ku baran doontaa sida loo isticmaalo.
Maanta waxaan idiinku soo gudbinayaa qaybtii ugu dambeysay ee Casharradan, halkaasoo aan ku sii daayay inaad horumariso nidaam aad kula shaqeysid farsamada farsamada ee Adobe na siiso
Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 5-aad)
Waxaan bilaabeynaa inaan dhameystirno casharkaan xiisaha leh, halkaas oo aan ku baranayno inaan la shaqeyno Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop.
Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (qaybta 4-aad)
Waxaan ku sii wadaynaa Tababarka: Workflow oo wata Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop halkaasoo maanta aan ku baran doonno inaan ku barno barnaamijka.
Casharro: Shaqo-socod leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 3-aad).
Waxaan ku sii wadaynaa Tababarka: Workflow oo wata Adobe Bridge iyo Photoshop, halkaasoo aan ku diyaarinaynay koox sawirro ah oo aan uga shaqeyn lahayn Photoshop,
Cashar barasho: Workflow with Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta 2aad)
Casharradii hore, waxaan bilownay inaanu kala saarno galka sawirada aan kuwada shaqeynayno kuwa aan isleenahay waxay ubaahan yihiin taabasho si aad ufiican
Cashar barasho: Workflow leh Adobe Bridge iyo Adobe Photoshop (Qaybta I)
Xirfadlaha sawirka waa inuu yaqaan nidaamyada farsamo ee ay bixiso teknolojiyada, iyo sidoo kale softiweerka si loogu tartamo shaqadooda.
Talooyin ku Saabsan Sawirka Waddada
Haddii aad rabto inaad yeelato sawirro magaalooyin kuu gaar ah, kaliya waa inaad raacdaa Tilmaamaha loogu talagalay sawir-qaadista Waddada ee aan hoosta kuugu soo bandhigayo.
Casharbarka: Si Deg Deg Ah U Xulo Muuqaaleedka Sawirka
Maanta waxaan wax ka qaban doonnaa hawsha ah xulashada font si dhakhso leh. Tan waxaan kuugu keenayaa, Casharbar: Si dhakhso leh ugu xulo muuqaalka sawir gacmeedka.
Melissa Ballesteros ama sida loo sawiro sida Bruce Timm oo aan u dhiman isku dayga
Horraantii 90-meeyadii, warshaddii animation-ka Mareykanka waxay ku jirtay mugdi. Ma ahayn wax ka yar. Gacmaha ...
Bruno Wagner ama sida loo sawiro ilaahyada
Sawirqaade Bruno Wagner wuxuu layaabay fanaaniinta sida Boris, Siudmak, HR Giger, Brom shaqadiisuna waxay siiwalinaysaa qoraayaashaan.
Tilmaamaha RAW ee Bilowga
Dhamaan waxyaabaha aasaasiga ah ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato RAW, ee ku jira Tilmaamahayaga RAW ee bilowga. Kala duwanaanshaha JPEG, hawlgalka, iwm.
Imtixaan loogu talagalay naqshadeeyayaasha: tijaabi xirfadahaaga imtixaanka
Maanta waxaan kuu keenaynaa laba imtixaan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha si aad u qiimeyn karto xirfadahaaga dareenka ugu badan: midabka iyo kerning. Immisa dhibic ayaad ku guuleysan kartaa?
Naqshadeynta dokumenteriyada ay tahay inaad aragto
Naqshadeynta dokumentariyada ayaa ah hab wanaagsan oo lagu barto fikradaha cusub, lagu arko aragtiyo kale, ama lagu milicsado mowduuc. Halkan waa liis fiican.
Waa maxay iyo sida loo sameeyo shaxda Gantt si loogu daro qandaraasyadaada
Jaantuska 'Gantt' wuxuu noo oggolaanayaa inaan si muuqaal ah u ogaanno waqtiyada kama dambaysta ah ee dhammaystirka mashruuc. Halkan ka baro sida loogu sameeyo mashaariicdaada qaabeynta sawirada.
Kerning, waa fikrad ay tahay inuu naqshadeeyaha garaafku ogaado
Halkaan waxaan ku cusbooneysiineynaa xusuustaada sharaxaad ku saabsan waxa loo yaqaan 'kerning', waxa loogu talagalay, noocyada jira iyo sida aad wax uga beddeli karto. Hagaajinta naqshadahaaga!
Wakhtiyada kama dambaysta ah: qarowga naqshadeeye garaafka
Waxaan idinla wadaageynaa taxanayaal taxane ah oo ku saabsan sida loola kulmo waqtiyada kama dambaysta ah ee naqshadeynta garaafka, si aad si fiican ugu shaqeysaan oo aad diiqad yar ku qabataan
Calaamadaha caanka ah ee caanka ah
Waxaan kuu keenay dhowr ka mid ah waxyaabaha layaabka leh ee ugu caansan uguna caansan ee aad ka heli karto shabakadda. Aan fiirino (iyo qosol) iyaga.
Maxaad ku samayn kartaa Shineemo 4D
Cinema 4D waa barnaamij animation iyo muuqaal abuuris 3D ah oo ay soo saartay shirkadda Maxon. Haddii aad xiisaynayso sawir gacmeedka, waa inaad ogaataa.
Cashar: 9 Tilmaamood oo loogu talagalay toogashada xilliga Jiilaalka
Bilaha jiilaalka waxay soo bandhigaan fursado qurux badan oo sawir qaadasho ah oo loogu talagalay shaqooyinka jiilaalka ama Kirismaska.
Casharro aasaasi ah: bogagga sayidka ee InDesign
Halkan waxaad ka heli doontaa cashar aasaasi ah oo ku saabsan isticmaalka bogagga sayidka ee InDesign: waxa ay yihiin, sida loo abuuray, sida ay u shaqeeyaan ... Muhiim u ah naqshadeynta.
7 fikradood oo wanaagsan si loo kordhiyo hal-abuurkaaga
Ma haysaa Baqdiyaha Qoraaga ee laga baqo, ama Baarka Naqshadeeye? Ka waran haddii aan kuu sheego inay jiraan siyaabo lagu kobciyo hal-abuurkaaga?
3 meelood oo laga iibsado laguna iibiyo sawirrada
Sannadkan xilligan oo kale, labada shay ee qeexaya hay'adda sawir qaadista ee 'Microstock' ayaa ah ku-xirnaansho iyo heshiisyo wanaagsan.
2 maareeye hawleed bilaash ah oo maalintaada kuu fududeyn doona
Maanta waxaan u nimid inaan kuu soo bandhigno 2 maareeye hawleed bilaash ah, qalab shaqo si loo gaaro urur wanaagsan (adiga iyo kooxdaagaba).
Sida loo qorsheeyo qaabeynta qaabdhismeedka shaxanka | Talooyin iyo Kheyraad
Halkan ka hel talooyin waxtar leh si aad u ogaato sida loo sameeyo miisaaniyad loogu talagalay naqshadeynta garaafyada: tusaalooyinka garaafka, xisaabiyeyaasha internetka, barnaamijyada maaraynta ...
Katarina Sokolova waa fanaanad reer Yukreeniyaan ah. Shaqooyinkiisu waxay ku saleysan yihiin warbaahinta dhijitaalka ah, isku darka sawir qaadista, rinjiyeynta dhijitaalka ah iyo walxaha 3D.
Casharbarka Sawirka: Sida loo sameeyo animations la Illustrator
Maanta waxaan kuu keenay casharkaan fudud ee hadana faa iidada badan leh oo aad ku baran karto sameynta Flash animations, adoo u adeegsanaya kaliya Sawirka.
Tababarka Photoshop: Sida loo adeegsado isla saamaynta dhowr sawir oo ka hawlgala dufcado
Miyaad jeceshahay inaad fududeyso shaqada ka shaqeynta sawirro kala duwan oo haddii kale noqon lahaa maalmo ama toddobaadyo illaa dhowr daqiiqadood ama mararka qaarkood ilbiriqsiyo?
Sida loo kaydiyo WordPress-kaaga
Ma ka daashay inaad haysato keydkaaga WordPress? Waa inaad aragto casharka aan maanta kuu keenayno. Sameynta koobigaaga waligeed ma fududaan.
Ku soo bandhig aqoonsigaaga shirkadda qaab xirfadle ah 11 jees jees ah oo aan kugu soo qaadannay qoraalkan oo aad macmiilkaaga u sheegto "Waan sameeyaa."
U hel saamayn qoraal ah majaajilada naqshadahaaga aan rasmiga ahayn ee Adobe Illustrator adigoo raacaya tallaabada fudud ee tallaabada ah ee aan maanta kuugu keenayno Hal-abuurka.
Sebastian Lester iyo ereyada
Sebastian Lester waa suugaanyahan la soo shaqeeyay shirkadaha ugu fiican adduunka iyaga oo u samaynaya waraaqo qaas ah. Maanta waa mid ka mid ah kuwa loogu doondoonista badan yahay.
Kaararka Kirismaska ​​waxay noqon karaan ilo wanaagsan oo lagu muujiyo kartidaada. Qoraalkan waxaan ku soo uruurinnay 10 si aan kuugu dhiirrigelin ka hor intaadan abuurin.
12 astaamaha nifty
Maalin kasta waxaan aragnaa boqolaal astaamo, laakiin kuwee ayaad awood u yeelan kartaa inaad maskax ahaan ku tarmo? Halkan waxaa ah 12 astaamo nifty ah oo aad xusuusan doontid. Haddayna ahayn, fiiri.
5 Casharrada Photoshop si loo abuuro badhannada shabakadda
Qeyb muhiim ah oo ka mid ah naqshadeynta bogga waa habka ay adeegsadayaashu u galaan una dhex maraan barta. Midka ugu weyn, dabcan, waa inaad gujisaa badhannada, markaa waa inaan hubinnaa inay muuqaal ahaan soo jiidasho leeyihiin
Farsamada sawir-qaadista waxaa si isdaba joog ah u isticmaala nashqadeeyayaal fara badan iyo kuwa jecel sawir-qaadista. Waxay ka kooban tahay qaadashada dhowr sawir ka dibna ku soo biir iyaga oo qaab hal sawir ah la soo bandhigayo
Mashruucan waxaan ku soo aruurineynaa 13 tusaalooyin wanaagsan oo ku saabsan adeegsiga caqliga leh ee boos bannaan ee naqshadeynta garaafka. Si aad noo dhiirrigeliso oo aan u barto aragtida.
5 Warqad si aan kuu waxyoodo
Astaanta Coca-Cola waxay ku guuleysatay inay sii jirto waqti ka dib, laga yaabee inay tahay warqad. Qoraalkan waxaan ku keenaynaa 5 xaraf oo kugu dhiirrigelinaya.
5 Casharro Photoshop ah si loogu adeegsado saamaynta qoraalka
Waxyaabaha badan ee lagu gaari karo iyadoo la adeegsanayo Photoshop, saamaynta qoraalka ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu caansan, maaddaama ay la wadaagaan sawirradu badanaa waa kuwa ugu muhiimsan astaan, cinwaan ama xayeysiin kasta.